Dhismaha derbiga xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya oo si kumeelgaar ah loo joojiyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDhismaha derbiga xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya oo si kumeelgaar ah loo joojiyay
March 30, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Dhismaha derbiga xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya oo si kumeelgaar ah loo joojiyay. [Xigashada Sawirka: Daily Nation]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dhismaha debiga xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa si kumeelgaar ah loo joojiyay.
Guddoomiyaha Mandheera ee Kenya Cali Rooba iyo guddoomiyaha Gedo ee Soomaaliya Maxamed Maxamuud Maxamed ayaa maanta oo Jimce ah kulmay waxayna sheegeen in labada dal ay isku raaceen in si kumeelgaar ah loo joojiyo dhismaha si loo sii waddo wadaxaajoodka u dhaxeeya labada dal.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale kulmi doona dhawaan si ay uga wadahadlaan xaalada derbiga ay Kenya ka dhiseyso xadka ay la wadaagto Soomaaliya, sida ay sheegeen guddoomiyaashu.
Maalmihii lasoo dhaafay xiisad ayaa ka taagneyd magaalada Beled Xaawo kadib markii Kenya ay halkaas dib uga bilowday derbi u dhaxeyn doona xuduuda labada dal. Dadka deegaanka Beled Xaawo ayaa aad uga carooday derbi dhisida Kenya iyaga oo ku eedeynaya in ay soo gashay qeyb kamid ah dhulka Soomaaliya.
Kenya ayaa dhismaha derbigaas oo dhererkiisu dhanyahay 440-km bilowday bishii Maarso ee sanadkii 2015, iyaga oo ku andacoonaya in uu joojin doono weerarada joogtada ah ee maleeshiyada Al-Shabaab ay ka geysato gudaha dalka Kenya.
March 18, 2017 Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo safar aan la ogeyn ugu tagay ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in ay magacowdo agaasimaha haayada NISA. Asad Cusmaan Cabdullaahi, kaasoo u tartamay madaxweynaha Puntland ee doorashadii dhacday bishii Janaayo 2019, ayaa kamid ah dadka ugu horeeya ee [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirka maalgashiga Puntland ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Garoowe ee caasimada Puntland. Khuburo iyo ganacsato ayaa shirka ku soo bandhigi doona fursadaha maalgashi ee ka jira Puntland oo sanadkii 1998 noqotay dowlad [...]
Diyaarinta Qorshaha Horumarinta 4-aad ee Puntland oo ka furmay Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Diyaarinta Qorshaha Horumarinta Puntland ee 4-aad 2020 -2024 ayaa maanta oo Arbaco ah ka furmay caasimada Garoowe. Masuuliyiin katirsan dowladda oo uu hoggaaminayo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka qaybgalay kulanka oo looga [...]